कमल सरोवर | साहित्य संसार
लेखक: कमल सरोवर
मुक्तक १ घर छैनन् घडेरी छैनन् मौन बस्दा सरकार कति दुख्छ गरीबको मन मौन बस्दा सरकार यो देशले मुहार खै कहिले र कसरी फेर्लान्?? खाडी पुग्छ युवा जीवन मौन बस्दा सरकार मुक्तक २ टाढै बाट दिनुछ आवाज गुजारा चलाउन छोड्नै पर्‍यौं गाउँ समाज गुजारा […]
‘सरोवर’ का तीन मुक्तकहरु
१. घरी प्यारले घरी तरवारले हिर्काउछन् हिर्काउन पनि अनेक प्रकारले हिर्काउछन् अरे यार कसरी चित्त बुझ्छ मेरो गाउँलाई?? घरीघरी तिम्रै शहर बजारले हिर्काउछन् २. कमजोर सोचिरहेँ तगडा होला सोचिएन काँडा भन्दानि फूल कडा होला सोचिएन जोड्न त सहजैले दिलसंग दिल जोडियो दिलसंग दिलको लफडा होला […]